China Abaqengqelezi ngomatrasi Abavelisi | URAYSON
Ekhaya > Iimveliso > Iimatrasi ezibhijelweyo
I-Rayson eqengqiwe umatrasi ngumatrasi wanamhlanje oqhelekileyo usetyenziswa ngokusebenza ngcono, kwaye isiseko sayo somqamelo senziwe ngemithombo. Isikhonkwane sinezibonelelo zothamba olulungileyo, ukusebenza okungcono kokuxhasa, ukomelela komoya oqinileyo kunye nokuqina. Amacandelo amathathu ahlukeneyo entwasahlobo azimeleyo ayilwe ngokungqongqo ngokungqinelana nomgaqo we-ergonomic anokukhula ngokutyibilikayo kunye nekhontrakthi ngokuhambelana negophe kunye nobunzima bomzimba womntu.
I-Rayson kwi-Rayson Zone Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Iimveliso eziphambili Eyona nto ibiza ixabiso eliphantsi kukunikezela umthengisi we-bonnell spring mattress. Ixabiso eliphantsi lentlawulelo ye-bonnell spring mattress Umsebenzi oqhubeka ixesha elide kunye nobomi benkonzo obude ubeka imveliso ngaphandle kwabakhuphisana nathi. Imveliso iyakwazi ukubonelela ngokhuseleko kwizinto. Yenziwe ngezinto ezingelula, izixhobo ezinganyanzelisi ifuthe kunye nesakhelo esomeleleyo zibonelela ngokhuseleko olongezelelekileyo. Ixabiso eliphantsi lentlawulelo ye-bonnell spring mattress Imveliso inesiphumo sokufunwa komsi. Inokwabela ngokulinganayo umthwalo kunye noxinzelelo kwiinyawo zombini ukunciphisa ifuthe lokufika.